My akaramba unomutsa nyaya neni zvishoma mukomana kunaka.
mukoma wangu zvinosimudzira Stig akanga nekusimbiswa Annerstads chechi makore mana akanga adarika. Handicharangariri nokusimbisa ake asi ini aidawo kuzosimbisa ini. Chikonzero nei Stig akasimbisa pacharo Handizivi asi ndaida chizadzikiswe, kwete kuti zvimwe zvipo zvichibvira, asi zvaiva nyore nokuda zvepachokwadi yangu chikamu.
Pandinotarira shure muupenyu hwangu, ndinonzwisisa kuti yangu nokusimbisa mubereko kwakakonzerwa akatendeseka uye zvakadzama kutsvaka Mwari. Pakanga emauto akadzingwa mabasa mumwoyo mangu.
Kusimbiswa dzidziso akaronga Annerstads nekereke rakapiwa mufundisi. Teaching aiva pauriri rechechi yacho munharaunda mavo imba yechipiri. Takanga pamwe 20 vechiduku vakomana nevasikana vari kuverenga.
Asi ndakaona kuti inosimbisa zvidzidzo dzakanga dzakaoma uye vakasimbarara. Takanga kuverenga zvinonzwika bhuku nezvokutenda yechiKristu kuti handina kunzwisisa chinhu. Ndinorangarira chinhu nhasi chii akadzidziswa kwatiri MUDZIDZISI WEKATEKIZIMU. Zvimwe ndikarega kunyange pamusoro kusimbiswa musi, raiva zuva pamberi rokuberekwa kwangu.
Asi simbiso sezvo vakadaro vaisagona rokuchinja kana kukanganisa kwangu somunhu. Ini ndichiri chete Chris yekare. Izvi kwakaratidzei nezvechiitiko tisati vaifanira kuenda kuchechi uye kuzosimbisa nesu. Mupristi yose MUDZIDZISI WEKATEKIZIMU vakanga vakaungana mukamuri duku pamberi inosimbisa.
Pandaida kuenda chimbudzi, izvo zvandakaita. Pandakadzoka, ndakanga akasasa mvura pamusoro chena chemise, vose MUDZIDZISI WEKATEKIZIMU nemizariro, kana ndakanga akageza maoko ake. Mumwe akataura izvi, asi ndakafunga kuti avhara izvozvo kana ini pee, saka ndakaisa zvakanaka ruzha expletive pamberi pomupristi yose MUDZIDZISI WEKATEKIZIMU. Mufundisi akataura mashoko angu kurwara-vakasarudzwa, uye Ndakapererwa pionröd pachiso changu. Asi sezvo takaenda kuchechi uye Rusimbiso akapfuura kure pasina dambudziko.
Kana takaenda kuchechi ini ini rwakatambanudzwa uye muchizvikudza vakabata Bhaibheri uye bhuku rwiyo. Asi zvakataurwa munguva kusimbiswa, Handina pfungwa.
Ndinofunga yangu kufarira kwechokwadi nokusimbisa yakanga kuti Mwari vakanditsvaka. Yaivawo kwairatidza kwandiri kuti ndakatsvaka Mwari wangu mudiki. Asi handina kumboziva kuti akanga Mwari.
Pandinotarira shure muupenyu hwangu, ndinoona zvimwe zviitiko apo Mwari vakanditsvaka. It angave zviitiko sezviduku, wandakaisa Ndakuudzai nezvevamwe bhuku indenna, asi pane zvave zvimwe zviitiko pakarepo chena dzaipenya kuti Mwari ariko uye kuti akaona ini.
Gare gare, ndinoda kuona kuti Mwari akanga asiri Mwari akafanana Santa Claus uyo kutyityidzira kupa chero zvipo kana asina mutsa, asi Mwari uyo akanga usingarondedzereki rudo duku murume. Mwari uyu ane rudo akapa nguva nenguva uye kunzwa zvishoma mufashoni isingagari kutyisidzirwa mukomana, asi haana kuziva kuti ndiani pasuo mwoyo muduku wake
Ndakanga makore anoverengeka kuti mupristi ndambodzidza kuri frikyrkopastor. Saka anofanira kunge aiva neruzivo sei kuti vaponeswe uye muKristu, asi haana kuudza ichi kwatiri. Ko dai makazviita. Ipapo ndingadai nechekare vakaponeswa uye akashatirwa zvose hwangu upenyu wakashandurwa. nenjodzi zhinji nenhamo angadai akadzivisa muupenyu hwangu. Sezvinobvumwa, akanga ataurwa zvinoshamisa ndima yeBhaibheri John 3 ne16 biblars edu kufukidza. Mashoko mundima iri:
"Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi."
Asi akanga ataurwa kuti ndima muBhaibheri, ndakaona kusvikira papera makore, uye akanga asina kuudzwa kana yakatsanangura ndima kwatiri. Kusimbiswa Saka haana kundiponesa.
Panguva ndichiri muduku, zvinogona dzimwe nguva nzwisa kuburikidza murima chiyeuchidzo waMwari. Handina kuzvinzwisisa, ipapo, asi kana ndaiva makore anoverengeka gare gare zvekumashure uye aigona kutarira shure muupenyu hwangu, ndaigona kuona zvakajeka.
Kwakadaro chinhu kwaigona vanoenda mumwoyo ini vaiva mapepa nomucheka nsturmotiv. Somuenzaniso, imwe zuva shure miti. Uye rugwaro. Ndaigona dzimwe nguva kuwana mapepa akadaro Somuenzaniso, muna yeko horo. Pandinoverenga ndima yeBhaibheri pamusoro pavo, Ndakashamiswa simba zvavaigona ane. Vakanga vari vapenyu uye aigona kutaura zvakarurama mumoyo mangu. Ndinonyatsoyeuka rimwe chiitiko chakadai sei kushamiswa uye akashamiswa kutarira posita. Zvino kakawanda uye pazviitiko zvakasiyana kuti Mwari akataura neni, uye akaita huzivikanwe idzi dzakasiyana. Asi handina kumboziva kuti ndiye kusvikira papera makore akawanda.
Ingrid Ljunggren akanga akanaka kwazvo rokudzidzisa dzakanyorwa zvidzidzo. Kazhinji, iye akaudza pamusoro kuzvidzora paakaziva zvinhu ini. Zvaiva nyore kuti ateerere uye tora mune zvaaitaura uye vakadzidzisa.
Pane imwe nguva ari chitendero Handimbofi ndakakanganwa. Handizivi kana aiva muKristu, asi akandiudza kuti iye nomurume wake vana vachangoberekwa ichiwira kurwara uye muchipatara. Ipapo vakanyengetera kuna Mwari kuti vana vavo vakanga chaizvo zvakanaka. Vakawana mhinduro kumunamato. Izvi akandoudza kirasi yose. Ndakagara chinyararire uye vakateerera vashamiswa muhofisi mangu.
The chikoro aivapowo kuti taizova prya nguva mumwe kwetemu munzvimbo dzakasiyana kuti muchidimbu nyika basa uye pamwe kuwana nokuimba nezvatichasangana vaizosarudza kuti giredhi wepfumbamwe, yandakavasimudzira pachena akanga akaoma chaizvo kuziva. Sezvo ndakanga artistically kufarira I kamwe prya dhipatimendi chitoro Tempo muna Ljungby somunhu Decorator. Vaiva pachavo decorators dzavo vashandi vaiita zviratidzo. Zvinosuwisa Ndaifarira kwete zvakanaka uye zvakanga zvakaoma kutora danho. Zvakanga zvichida nokuda kwangu mufashoni uye hainyatsozivikanwi nzira.
Nokuda kwangu chipeto uye kufarira uri yaiva hurukuro imwe kwetemu kuti ndinoda kuwana prya pavhiki bvunzo mumutsara kukoreji wechiKristu Helsingborg. Psyokonsulenten akakwanisa neni ikoko vhiki. Ndinorangarira ndaifanira kuchovha bhazi pasi Helsingborg, kunyange ndakanga kunetseka nezvandaida rurefu, asi zvakanaka, uye ipapo kwakauya mudzidzisi kubva chikoro uye akarinhonga neni. Ndaigara kumba nemhuri yake.
Ndakanzwisisa kuti vaiva vaKristu, asi handina kuziva kuti zvairevei. Uye kana vakatsanangura chinhu nezvazvo kwandiri.
An manheru panguva kukoreji, ndakanga ndakamira neboka vadzidzi uye vakatarisa vamwe bhora vatambi. Pandakabvunza mumwe wavo kana kwete chikoro ichi raiva muKristu. Ndakabva aiva kwamagwaro refu naye umo akatsanangura kure vaKristu. Ndaiva nzvimbo muKristu, asi havana kunzwa chinhu nezvaJesu. Saka pedyo asi kure ...
Pamba Foster yangu kumba, ndakawana duku chena Gideon Bhaibheri rakanga tucked iri bhukukesi iri yokumusoro. Handizivi akanga apiwa izvozvo. Zvimwe kwaiva mukoma wangu vokugara. Handiyeuki kuti zvakanga zvangu. Zvichida mukoma wangu kuiona kana godeonierna kuparadzira Bhaibheri New Testament in kirasi yechikoro kuti akanga aenda. Gidroniter makadanirwa yokupfuudza ndokuzovapa maBhaibheri pakati snmst muzvikoro uye muhotera makamuri uye mumajeri. Ivo vakatora zita pashure Gideon muTesitamende yekare.
Ndinoisa zvisvundu pasofa iri yokumusoro yokuverenga. Zvakanga zvakafanana pamubhedha kuti ini ndigere kana pepanhau akanga nyaya ini wangu cartoons makore mashomanana akanga apfuura.
Ndakatanga kuverenga muvhangeri yaMateu uye akanga achangobva Varidza kure nezvandakaverenga. Zvinofadza kwakanga! Ini ndisingagoni kurega.
Ndakaverenga nezvaJesu uye sei akarovererwa uye kuti Mwari akamumutsa kuvakafa pazuva rechitatu. Chiitiko chose kunoshamisa akanga kupendwa kumusoro mupfungwa dzangu uye ndaigona kuona izvozvo.
Mashoko vaigara pandaiverenga. Vakasangana zvakanaka mumwoyo mangu. Yakanga isingori munhuwo nyaya.
TEVEDZERA Serial MY ari undesired